Isimiso Se-FMBR Technology - JDL Global Environmental Protection, Inc.
I-FMBR isifinyezo se-facultative membrane bioreactor. I-FMBR isebenzisa i-microorganism ebonakalayo ukudala indawo enesimo futhi yakha uchungechunge lokudla, ikwazi ukufeza ukukhishwa kwe-sludge organic ephansi kanye nokonakala ngasikhathi sinye kokungcola. Ngenxa yomphumela wokwehlukanisa osebenzayo we-ulwelwesi, umphumela wokwehlukanisa ungcono kakhulu kunowo wethangi lendabuko le-sedimentation, ukungcola okuphathwayo kucacile ngokwedlulele, futhi udaba olumisiwe kanye no-turbidity kuphansi kakhulu.
Ukuphefumula okungapheli kweseli kuyindlela esemqoka yokwehlisa udaka lwe-organic. Ngenxa yokuhlungwa okukhulu kwe-biomass, i-SRT ende nesimo se-DO esiphansi, ama-nitrifiers ahlukahlukene, izinto ezintsha ze-ammonia oxidizing (kufaka phakathi i-AOA, i-Anammox), kanye ne-denitrified ingahlangana endaweni efanayo, futhi amagciwane asohlelweni aqedelana ukuze akhe i-web microbial food bese ususa i-C, N ne-P ngasikhathi sinye.
● Ukususwa ngasikhathi sinye kwekhabhoni, i-nitrogen ne-phosphorus
● Ukudonswa okuncane okusalela kwendle okusetshenziswayo
● Ikhwalithi yokukhipha enhle kakhulu
● Ukufakwa kwamakhemikhali ubuncane ekususweni kwe-N & P
● Isikhathi esifushane sokwakha
● Unyawo oluncane
● Ukusetshenziswa kwamandla aphansi / aphansi
● Nciphisa ukukhishwa kwekhabhoni
● Okuzenzakalelayo nokunganakiwe
Izinhlobo Zokwakha ze-FMBR WWTP
Iphakheji FMBR Izinsiza kusebenza WWTP
Le mishini ihlanganiswe kakhulu, kanti umsebenzi womphakathi udinga kuphela ukwakha ukwakhelwa kabusha, isisekelo semishini kanye nethangi lokungcola. I-footprint incane kanti nesikhathi sokwakha sifushane. Ifanele izindawo ezibabazekayo, izikole, izindawo zezentengiselwano, amahhotela, imigwaqo emikhulu, ukuvikelwa kokungcola okumanzi, ukwelashwa okusetshenzisiwe, kanye nezindawo zokwelapha ezindaweni zokuhlala, iphrojekthi yezimo eziphuthumayo, ukwenziwa ngcono kweWWTP.
Ukhonkolo FMBR WWTP
Ukubukeka kwalesi sitshalo kungubuhle obunezinyathelo ezincane, futhi kungakhiwa ku-WWTP yemvelo, engeke ikuthinte ukubukeka kwedolobha. Lolu hlobo lwe-FMBR WWTP lulungele iphrojekthi enkulu kamasipala ye-WWTP.
Imodi Yokwelashwa ye-FMBR
Itheknoloji yendabuko yokuhlanzwa kwamanzi angcolile inezinqubo eziningi zokwelashwa, ngakho-ke idinga amathangi amaningi ama-WWTPs, okwenza ama-WWTP abe yisakhiwo esiyinkimbinkimbi esinezinyathelo ezinkulu. Ngisho nama-WWTP amancane, futhi idinga amathangi amaningi, okuzoholela ezindlekweni eziphakeme zokwakha. Lokhu kubizwa nge- "Scale Effect". Ngasikhathi sinye, inqubo yendabuko yokuhlanzwa kwamanzi angcolile izokhipha inani elikhulu lendle, nephunga liyasinda, okusho ukuthi ama-WWTP angakhiwa eduze nendawo yokuhlala. Le yinkinga ebizwa ngokuthi "Not in My Backyard" inkinga. Ngalezi zinkinga ezimbili, ama-WWTP endabuko ajwayele ukuba ngosayizi omkhulu futhi aqhelelene nendawo yokuhlala, ngakho-ke uhlelo olukhulu lwendle olunotshalo oluphezulu luyadingeka. Kuzoba nokungena nokungena okuningi ohlelweni lokuthuthwa kwendle, ngeke nje kungcolise amanzi angaphansi komhlaba, kodwa futhi kuzonciphisa nokusebenza kahle kokwelashwa kwama-WWTP. Ngokocwaningo oluthile, utshalomali lwamapayipi okuhambisa indle luzothatha cishe u-80% wotshalomali jikelele lokuhlanzwa kwamanzi angcolile.
Ubuchwepheshe be-FMBR, obenziwa yi-JDL, bunganciphisa izixhumanisi zokwelashwa eziningi zobuchwepheshe bendabuko bube yisixhumanisi esisodwa se-FMRB, futhi uhlelo lucindezelwe kakhulu futhi luyimishini ejwayelekile, ngakho-ke umkhondo wezinyawo uzoba mncane futhi nomsebenzi wokwakha ube lula. Ngasikhathi sinye, kunodaka olumbalwa lwensalela olusalile nolungacishe lube nephunga, ngakho-ke lungakhiwa eduze kwendawo yokuhlala. Sengiphetha, ubuchwepheshe be-FMBR bufanele ngokuphelele imodi yokwelashwa esezingeni elisezingeni eliphansi, futhi buqonda ukuthi "Qoqa, Uphathe Futhi Usebenzise kabusha", okuzonciphisa nokutshalwa kwemali ohlelweni lokuhambisa indle.
Ama-WWTP wendabuko ngokuvamile amukela amathangi esakhiwo sokhonkolo. Lolu hlobo lwe-WWTPs luthatha unyawo olukhulu olunezakhiwo zezitshalo eziyinkimbinkimbi nephunga elisindayo, futhi ukubukeka akuhambisani nomuzwa. Kodwa-ke, ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-FMBR obunezici ezinjengezinqubo ezilula, akukho phunga futhi kunensali encane eyindayo, i-JDL ingakha lesi sitshalo “ohlelweni lokwelashwa ngaphansi komhlaba bese upaka ngenhla komhlaba” i-WWTP yemvelo ngokulungiswa kwamanzi angcolile nokusetshenziswa kabusha, okungagcini nje ngokugcina izinyawo, kepha futhi inikezela ngendawo eluhlaza yemvelo yokuhlala ezungezile. Umqondo we-FMBR WWTP yemvelo unikeza isisombululo esisha kanye nomqondo wokuthola ukonga nokusebenzisa kabusha, kanye ne-WWTP enobungani bemvelo.